के तपाइँ जान्नुहुन्छ कसरी बाहिरी शिविर मा सुत्ने झोला को उपयोग गर्न को लागी?
कसरी जाडो शिविर को समयमा राम्रो संग सुत्न को लागी? न्यानो निद्रामा? एक तातो सुत्ने झोला साँच्चै पर्याप्त छ! तपाइँ अन्तमा तपाइँको जीवन मा पहिलो सुत्ने झोला किन्न सक्नुहुन्छ। उत्साह को अतिरिक्त, तपाइँ पनी तातो राख्न को लागी सुत्ने झोला को सही अवधारणा जान्न को लागी शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। जब सम्म य ...
बाहिरी पाल कसरी छनौट गर्ने?
1. तौल/प्रदर्शन अनुपात यो बाहिरी उपकरण को एक महत्वपूर्ण मापदण्ड हो। एउटै प्रदर्शन अन्तर्गत, वजन मूल्य को विपरीत आनुपातिक छ, जबकि प्रदर्शन मूलतः वजन को आनुपातिक छ। सरल शब्दमा भन्नुहोस्, उत्कृष्ट प्रदर्शन, हल्का वजन उपकरण लागत ...
के barbell squats काँध प्याड चाहिन्छ?
धेरै मानिसहरु barbell squats गरिरहेछन् जब उनीहरुलाई मोटो फोम प्याड (काँध प्याड) प्याड गर्न को लागी आवश्यक छ, यो साँच्चै आरामदायक देखिन्छ। तर अनौठो छ, यस्तो लाग्छ कि भर्खरै स्क्वाटिंग अभ्यास गर्ने नौसिखहरु त्यस्ता कुशन को उपयोग गरीरहेका छन्। फिटनेस विशेषज्ञहरु जो सयौं किलोग्राम को बार ...
योग तकिया कसरी प्रयोग गर्ने
समर्थन साधारण सिटिंग यद्यपि यो मुद्रा साधारण बैठक भनिन्छ, यो कडा शरीर संग धेरै मानिसहरु को लागी सजिलो छैन। यदि तपाइँ यो एक लामो समय को लागी गर्नुहुन्छ, यो धेरै थकाउने हुनेछ, त्यसैले एक तकिया को उपयोग! कसरी प्रयोग गर्ने: -तपाइँको खुट्टा स्वाभाविक रूप मा पार संग एक तकिया मा बस्नुहोस्। -घुँडा मा छन् ...
कसरी फिटनेस को लागी पानी को सही ढंगले भर्ना गर्न को लागी, संख्या र पिउने पानी को मात्रा सहित, तपाइँ कुनै योजना छ?
फिटनेस प्रक्रिया को दौरान, पसीना को मात्रा धेरै बढ्यो, विशेष गरी तातो गर्मी मा। केहि मानिसहरु सोच्छन् कि जति धेरै पसिना आउँछ, त्यति नै धेरै बोसो गुमाउनुहुन्छ। वास्तव मा, पसीना को फोकस तपाइँ शारीरिक समस्याहरु लाई विनियमित गर्न मा मदद गर्न को लागी हो, त्यसैले पसीना पनी mus को एक धेरै ...
TRX प्रशिक्षण बेल्ट कसरी प्रयोग गर्ने? तपाइँ कुन मांसपेशिहरु व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ? यसको प्रयोग तपाइँको कल्पना भन्दा बाहिर छ
हामी प्राय जिममा निलम्बित लोचदार ब्यान्ड देख्छौं। यो trx हाम्रो शीर्षक मा उल्लेख छ, तर धेरै मानिसहरुलाई थाहा छैन कसरी प्रशिक्षण को लागी यो लोचदार ब्यान्ड को उपयोग गर्न को लागी। वास्तव मा, यो धेरै प्रकार्यहरु छन्। विस्तार मा केहि विश्लेषण गरौं। 1.TRX छाती पुश पहिलो मुद्रा तयार। हामी बनाउँछौं ...
कसरी फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य मा मद्दत गर्दछ
वर्तमान मा, हाम्रो देश को राष्ट्रीय फिटनेस पनि एक तातो अनुसन्धान क्षेत्र बनीएको छ, र फिटनेस व्यायाम र मानसिक स्वास्थ्य को बीच सम्बन्ध पनि व्यापक ध्यान प्राप्त भएको छ। जे होस्, यस क्षेत्र मा हाम्रो देश को अनुसन्धान मात्र शुरू भएको छ। अभावका कारण ...
Dumbbells को लागी छनौट के हो, तपाइँ यो लेख पढे पछि बुझ्नुहुनेछ
Dumbbells, सबैभन्दा प्रसिद्ध फिटनेस उपकरण को रूप मा, आकार, तौल घटाउने, र मांसपेशी प्राप्त गर्न मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यो स्थल द्वारा प्रतिबन्धित छैन, प्रयोग गर्न को लागी सजीलो, भीड को बावजुद, शरीर मा हरेक मांसपेशी मूर्तिकला गर्न सक्नुहुन्छ, र धेरै बी को लागी पहिलो छनौट बन्न सक्छ।
घर मा र जिम मा काम को बीच के फरक छ?
आजकल, मानिसहरु लाई सामान्यतया फिटनेस को लागी दुई विकल्प छ। एउटा व्यायाम गर्न जिम जानु छ, र अर्को घर मा अभ्यास गर्न को लागी हो। वास्तव मा, यी दुई फिटनेस विधिहरु को आफ्नै फाइदाहरु छन्, र धेरै मानिसहरु दुई को फिटनेस प्रभाव को बारे मा बहस गर्दै छन्। त्यसोभए तपाइँ ...
के तपाइँ जान्नुहुन्छ के फरक अनुभव योग तपाइँ ल्याउन सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ कहिल्यै छुट्टै र तपाइँको शरीर र दिमाग बाट अलग भएको महसुस गर्नुभयो? यो एक धेरै सामान्य अनुभूति हो, खास गरी यदि तपाइँ असुरक्षित, नियन्त्रण बाहिर, वा पृथक महसुस गर्नुहुन्छ, र विगतको वर्ष वास्तवमा मद्दत गर्दैन। मँ साँच्चै मेरो आफ्नै दिमागमा देखा पर्न चाहन्छु र मेरो साथ सम्बन्ध महसुस गर्न चाहन्छु ...
कुन राम्रो छ, लेटेक्स प्रतिरोध ब्यान्ड वा tpe प्रतिरोध ब्यान्ड?
1. TPE प्रतिरोध ब्यान्ड TPE सामाग्री को विशेषताहरु राम्रो लचीलापन र तन्य शक्ति छ, र यो सहज र चिल्लो लाग्छ। यो सीधा extruded र एक extruder द्वारा गठन गरीएको छ, र प्रशोधन सरल र सुविधाजनक छ। TPE अपेक्षाकृत गरीब तेल प्रतिरोध छ ...
२०२१ (३ thऔं) चाइना स्पोर्ट्स एक्स्पो शंघाईमा भव्यताका साथ खुलेको छ
मे १ th मा, २०२१ (३ thऔं) चीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सामान एक्स्पो (यसपछि २०२१ खेलकुद एक्सपो को रूपमा उल्लेख गरिएको छ) भव्यताका साथ राष्ट्रिय सम्मेलन र प्रदर्शनी केन्द्र (शंघाई) मा खोलिएको हो। २०२१ चीन खेलकुद एक्सपो तीन थीम्ड प्रदर्शनी क्षेत्रहरुमा विभाजित छ ...